नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा आफ्नो ३१ वर्षे सेवा अवधी बिताएर चार वर्षअघि डेपुटी गर्भनरबाट निवृत्त भएका महाप्रसाद अधिकारी १७ औं गभर्नरको रुपमा पुनः केन्द्रीय ब्यांक फर्किएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले उनलाई त्यस्तो चुनौतीपूर्ण बेलामा मौद्रिक व्यवस्थापनको नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, जतिबेला देश र सिंगो संसार कोरोना महाव्याधिसँगै निम्तिएको आर्थिक अत्याससँग जुधिरहेका छन् ।
कोरोनाभाइरसको विस्तार नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीले देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो आघात पुग्ने निश्चित भएका बेला नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वायत्त निकायको नेतृत्व गर्दैछन् ।
राष्ट्र ब्यांकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा पाएको डेढ वर्ष नपुग्दै तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०६७ सालमा अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर छानेको भनेर राष्ट्र ब्यांकका उपल्ला अधिकारीहरुको आलोचनाका बावजूद अधिकारीले गर्भनर डा.खतिवडाको सारथीको रुपमा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, नियमन, संस्थागत सुशासन स्थापनाका लागि राम्रो काम गरे ।
चार वर्षअघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका अधिकारी अहिले फेरि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाकै पहलमा राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वमा पुगेका छन् । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा आलोकाँचो निर्णय गरेको भनी अपजस भोगिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, अनुभवी र परिपक्वलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने भनी अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले मनाउन सफल भएपछि अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएका हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पृष्ठभूमिबाट गभर्नर हुने अधिकारी पहिलो व्यक्ति हुन् ।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेसँगै खोटाङमा जन्मिएका अधिकारीले २०४२ सालमा सहायक पदबाट राष्ट्र ब्यांकमा करिअर शुरु गरेका थिए । जागीरकै क्रममा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक र सन् १९९३ मा ‘द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इण्डिया’बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको अध्ययन पूरा गरेका थिए । आफ्नो करिअरको लामो समय ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण विभागमा बिताएका अधिकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको गहिरो अनुभव र ज्ञान भएको उनका सहकर्मीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, “वित्तीय क्षेत्रको कुशल प्राविधिक दखल भएकाले अधिकारीसँग वित्तीय स्थायित्वको चुनौतिलाई सामना गर्ने बलियो सामथ्र्य छ ।” राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल ब्यांकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी पनि वित्तीय प्रणालीको सम्पूर्ण अवयव बुझेका र सोचीविचारी परिपक्व निर्णय गर्नसक्ने भएकाले अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने बताउँछन् ।
डा. खतिवडा गभर्नर बनेर आउँदा देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा थियो । २०६६÷६७ सालताका घरजग्गा क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ओइरिएर समग्र वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति थपिएको थियो । सर्वसाधारणले लगानी गरेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक सुशासनको कमीका कारण सञ्चालकहरुको रजगज थियो ।
वित्तीय क्षेत्रलाई गहिरो गरी बुझेका अधिकारीले गभर्नर डा.खतिवडालाई यी समस्याको खरो व्यवस्थापनमा सघाउँदै वित्तीय क्षेत्रका बेथितिलाई तह लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । समस्यामा परेको नेपाल बंगलादेश ब्यांकको व्यवस्थापन नेतृत्व सम्हालेको अनुभवले अधिकारीलाई वित्तीय क्षेत्रका समस्या बुझ्न सघाएको थियो ।
वित्तीय सुधार कार्यक्रम, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सुधारदेखि संस्थागत सुशासनका लागि नीति निर्माणसम्ममा अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । ब्यांकिङ क्षेत्रको सञ्चालन जोखिम कम गर्न र जोखिम व्यवस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘बासेल–२’ प्रणाली लागू गराउन संयोजकका रुपमा अधिकारीले काम गरे ।
यसअघिका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपालले अघि सारेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धिको प्रस्तावलाई बलियो भरोसा दिने काम पनि अधिकारीले गरेका थिए । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा पनि अधिकारीले लगानी विस्तारका लागि सहजीकरणको काम गरेको छवि छ ।
वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान तथा नियामकका रुपमा लामो अनुभव भएका अधिकारीको सम्मुखमा कोरोनाभाइरसका कारण खल्बलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्न सरकारलाई आड दिनुपर्ने ठूलै चुनौति छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा दुष्परिणाम निम्तिने पक्कापक्की छ । आर्थिक क्रियाकलाप नभएपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले तिर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ ।
त्यसो हुँदा, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरु खराब ऋणको चक्रमा परेर अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छन् । त्यस्तो संकटलाई टार्न अधिकारीले तारणहारको जिम्मेवारी निवार्ह गर्नुपर्नेछ ।
सम्मुखको संकट टार्न प्याकेज डिजाइन गर्ने जिम्मेवारी पनि अब उनकै काँधमा आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको गहिरो ज्ञान भएपनि समग्र वृहद अर्थतन्त्रको बलियो ज्ञान नभएको भनी हुने आलोचनालाई चिर्न पनि अधिकारीले अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन काम गर्नुपर्नेछ । र, त्यो पनि तत्कालै ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहने केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नरको निर्णयले मुलुकको आर्थिक नीति निर्धारणका साथै सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ । अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर मात्र गर्दैनन्, उनले गर्ने निर्णयबाट हाम्रो खल्तीको पैसाको मूल्य समेत निर्धारण हुन्छ ।
त्यसैले, उनको अडान र निर्णय क्षमता सधैं परीक्षामा रहन्छ । यसै पनि, अधिकारीलाई छिटो र आँटिलो निर्णय गर्नसक्ने क्षमता कमजोर भएको भनी आलोचना हुन्छ । त्यसैले, कठिन अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई गति दिँदै मूल्यवृद्धिसँग जुध्न आँटिलो निर्णय लिनुपर्ने दायित्व उनमा छ ।
वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकहरुको हितको रखबारी तथा संरक्षणमा राष्ट्र ब्यांकले मसिनोसँग काम गर्न सकेको छैन । नाफाको लोभमा रहेका ब्यांकको अवान्छित दोहनलाई रोक्दै ग्राहकहरुको हितलाई संरक्षण गर्न अधिकारीले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
यसका लागि उनले ब्यांकरहरुको दबाव झेल्ने सामथ्र्य र अडान लिन सक्नुपर्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाँहि अर्थमन्त्रालयको दबावलाई परास्त गर्दै स्वायत्त निकायको रुपमा राष्ट्रब्यांकको गरिमा जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि अधिकारीमै छ ।